အဆိုပါ Lego Classic Space VIP စုဆောင်းနိုင်သောဒင်္ဂါးသည်အွန်လိုင်းတွင်အရူးအမူးစွဲလမ်းနေသောငွေများဖြင့်ရောင်းချနေသည်
အဆိုပါ Lego Classic Space VIP Collectible Coin သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောငွေများကို eBay တွင်ရောင်းချနေသည်
01 / 04 / 2021 01 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 692 Views စာ0မှတ်ချက် Classic အာကာသ, စုဆောင်းနိုင်သောဒင်္ဂါးပြား, ကို eBay, Lego, Lego အာကာသ, VIP, VIP ဆုပေးစင်တာ
အကယ်၍ သင်သည်တောက်ပနေသောတဒင်္ဂလေးတစ်ခုအတွက်အမှန်တကယ်ဒင်္ဂါးအမြောက်အများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်ကြံစည်လျှင် Classic အာကာသအထိမ်းအမှတ်နောက်ဆုံးပေါ် Lego eBay တွင် VIP Collectible Coin သည်ရူးသွပ်သောငွေများအတွက်ရောင်းပြီးဖြစ်သည်။
စီးရီးအတွက်စတုတ္ထအကြွေစေ့ ပေါ်လာတယ် ထဲမှာ VIP ဆုပေးစင်တာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မိနစ် 30 ဒီနံနက်, မတိုင်မီ ထွက်ရောင်း တော်တော်များများချက်ချင်း။ ၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်ကဲ့သို့ပင် eBay တွင်အလှည့်ကျလုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်သည် တောင်းဆိုချက် သူတို့အားဒင်္ဂါးပြားအဘို့ရှိပါတယ် သိသိသာသာချွတ်အအေး, အ Classic Space memento သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုမှာယူသည်
ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ခုက "အခုဝယ်ပါ" လေလံ £ 99 ၏မင်းသားပေါင်းလဒ်များအတွက်တိုက်ရိုက်သွား၏လေးနာရီအတွင်းတက်ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ငါတို့အများစုအိပ်ပျော်နေတုန်းနံနက် ၁ နာရီမှမနက် ၅ နာရီအကြားဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် - ထိုအကြွေစေ့သည်အမှန်တကယ်တွင်ပေါ်လာသည်ကိုအကြံပြုသည် VIP ဆုပေးစင်တာ ညဘက်တွင်လုံးဝဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီ (ထို့နောက်ပြန်လာပြီးရောင်းထွက်သည်။ ဆက်လက်ထားရန်ကြိုးစားပါ) ။
နောက်ထပ်ဒင်္ဂါးတစ်ပြားရောင်းသည် £ 84.95 များအတွက်, စဉ်တွင် နောက်ထပ်နှစ်ခု ရောင်းသူများကကန ဦး အတွက်၎င်းတို့၏ဒင်္ဂါးများကိုစာရင်းပြုစုပြီးနောက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့သည် တစ်ပေါင်£ 79.99။ ဒီဟာမနက်ခင်းရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာခင်ဗျားရဲ့ငွေတစ်ဝက်လောက်သာပြန်သည်။ 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery.
ဤရောင်းသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှထိုဒင်္ဂါးတွင်လက်ဝယ်မရှိကြောင်းသတိရသင့်သည်။ eBay လေလံများသည်ကြိုတင်မှာယူမှုများသာဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက Lego အဖွဲ့ကိုပေးပို့ရန်အတွက် Group ၏လိုလားမှု မှားသော ဒင်ျငါးငှေVIP ဆုမပေးမီမူလလေလံ ၀ ယ်သူမတိုင်မီထိုလေလံတစ်ခုခုကိုရယူခြင်းသည်အန္တရာယ်များနိုင်သည်။
သို့သော်၎င်းရပ်တည်ချက်သည်သင်၏လက်ကိုကိုင်တွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် Classic အာကာသအကြွေစေ့။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Nuremberg Toy Fair သည်ယခုနှစ်အတွင်း LEGO အစီအစဉ်များကိုပြသမည်မဟုတ်ပါ
Lego Marvel 40454 Spider-Man ယခုရရှိနိုင် Venom နှင့် Iron Venom နှိုင်းယှဉ် →